Ny tsy fahampian'ny lahy - famantarana sy ny soritr'aretina, ny fitsaboana ny tsy fahampian'ny lahy
Ny tsy fahampiana lehilahy - ny antony mety sy ny fitsaboana tsara indrindra
Miaraka amin'ny tsy fisian'ny fahanginana efa hatry ny ela , dia matetika no mino fa ny andraikitra rehetra dia mitoetra amin'ny reny hoavy. Ny zava-manahirana ao amin'ny planina momba ny fiharian-karena dia manakana ny fanombohana ny fitondrana vohoka. Nefa amin'ny fampiharana, amin'ny 45% amin'ny tranga, ny tsy fisian'ny zaza ao amin'ny mpivady dia mitarika amin'ny tsy fahampian'ny lehilahy.
Mety hisy tsy fahazakana olona ve?
Matetika ny tsy fahampian'ny lehilahy. Tokony ho ny antsasaky ny fotoana ifandrenesana ny olana amin'ny fahatanorana, ny fahadisoana dia mitoetra amin'ny mety ho ray. Ny teny hoe "tsy fahampian-tsain-tanana" dia ampiasaina raha ny fitondrana vohoka na ny vady dia tsy mitoetra ao anatin'ny herintaona amin'ny fiainana ara-nofo tsy misy fampiasana fanabeazana. Amin'ity tranga ity, mahazatra ny manavaka ny karazana tsy fahampian-tsoa amin'ny lehilahy:
Kilonga - fanitsakitsahana izay tsy nahomby ny fiezahana hitoe-jaza ankizy iray.
Sekoly faharoa - dia voamarikao raha nisy ny fisainana taloha, na dia tsy nifarana tamim-pahombiazana aza ilay vohoka. Ity endrika ity dia tsara azo atao amin'ny fitsaboana, indrindra fa raha misy ny firaisana mandritra ny 3 taona farany.
Antony mahatonga ny tsy fahampian'ny olona
Rehefa nodinihina ny karazana lahy tsy voavolavola, dia tokony homarihina fa matetika no mitovitovy ny antony mahatonga azy ireo. Anisan'ny antony lehibe manosika ny fanitsakitsahana ny asa fananahana amin'ny lehilahy, ny dokotera dia miantso hoe:
aretina amin'ny rafi-pitondran-tena momba ny natiora mifindra amin'ny aretina: epididymitis, orchitis, vesiculitis, prostatitis;
fanitsakitsahana ny dingan'ny fanabeazana spermatozoa - spermatogenesis;
fanovana ao anaty ranon-tsavona voajanahary voajanahary - viscipathy;
ny fanavakavahana amin'ny fiterahana amin'ny rafitry ny fananahana lahy: monarchisme, cryptorchidism , hypospadias;
Aretin'ny aretina: diabeta, tuberkuleza, aretin'ny tiroidia, rafi-panafody, mopera, cirrhose ny atiny;
fanatrehana fitsaboana chirurgie eo amin'ny taova kelikely: fanesorana ny hernia inguinal, hydrocele, fandidiana ao amin'ny bala;
mitantana hormonina, taratra na fitsaboana simika, mitondra fanafody marary;
fanitsakitsahana ny ejaculation;
Ankoatr'izany, misy ny antony mampitombo ny tahan'ny tsy fahampian-tsakafo:
mifandray amin'ny zavatra mampidi-doza;
miasa amin'ny famokarana simika;
trauma amin'ny génitaires;
Tsiambaratelo tsiambaratelo amin'ny lehilahy
Ny sektora dia antsoina hoe karazana tsy fahampian-tsakafo, izay ny fanitsiana ny isan'ny spermatozoa ilaina amin'ny spermatozoa. Mandritra izany fotoana izany, ny fanitsakitsahana ny rafitra, ny morphologie de spermatozoa, ary ny faharetany dia azo raisina. Ireo fotodrafitr'asa roa ireo dia singa manan-danja amin'ny selan'ny zatovo lahy Vantany vao nahitana azy ireo, ny fanamafisana ny atody ao amin'ny vatan'ny vehivavy dia mitranga.
Ny tsy fahampian'ny lahy dia mety maharitra na maharitra. Noho izany dia mety hitranga matetika ny fanitsakitsahana ny tsiambaratelon'ny cell kelin'ny germs rehefa:
miteraka hafanana ambony (sauna, sauna);
Ny fanitsakitsahana tsy tapaka ny tsiambaratelo dia matetika vokatry ny tsy fahampian-tsakafo ara-panafody na ny fanavakavahana amin'ny fiterahana. Noho izany, ny varicocele sy ny tsy fahampiana amin'ny lehilahy dia hevitra roa tsy azo sarahina. Ankoatr'izay dia matetika ny faharesen'ny sela secretaire amin'ny rafi-pihodinan'ny lehilahy amin'ny gaza dia miteraka aretim-ponenana, aretina auto-immune. Ny atroma sy ny sekreteran'ny sekretera dia ny tsy fahitan-doza, izay ny hany fotoana ahafahana miteraka zaza dia ny fampiasana tsiranoka donne.
Matoanteny amin'ny teny indonezianina
Matetika ny lahy no mahatonga ny sertifika tsy ho voan'ny aretina azo avy amin'ny fandikana ny spermatozoa eo amin'ny vas deferens. Ny pathology dia mety amin'ny lafiny iray sy ny lafiny roa. Amin'ny tranga voalohany, ny diabeta dia mihena ny spermatozoa amin'ny ejaculate. Raha misy ny fanitsakitsahana ny tsirin-tsakafo roa amin'ny sembana, dia tsy misy intsony ny sela. Misy antony maro mahatonga ny fampiroboroboana ny endri-panajana. Anisan'ny mpitsabo matetika:
epididymitis (fiteran'ny epididymis);
trauma of gonads;
tuberculosis of the genital organ;
Fihetsehana tsy ampoizina amin'ny asa amin'ny taova kelin'ny valizy (rèctum, ureters, rectum).
Fahadisoana amin'ny lehilahy - famantarana sy soritr'aretina
Ny endriky ny tsy fahampiana amin'ny lehilahy dia matetika miafina. Matetika ny solontenan'ny lahy dia mahatsiaro tena, ary ny olana dia nambara tamin'ny alalan'ny drafitrasa ataon'ny ankizy roa. Matetika ny vehivavy voalohany no hodinihina ary avy eo ny vadiny. Na izany aza, amin'ny tranga sasany, dia mety misy soritr'aretina manondro indraindray ny tsy fahombiazan'ny rafitry ny fananahana amin'ny lehilahy. Anisan'izany ireto:
Olana amin'ny firaisana ara-nofo (vitsy kely ny ejaculate, fanitsakitsahana ny dingan'ny ejaculation, dysfunile erectile, mihena ny faniriana hanao firaisana);
ny fanaintainana sy ny fivoahana ao amin'ny tahan-tsakafo;
ny fitsaboana amin'ny areti-mifindra;
gynecomastia (fitomboan'ny ratra madinika);
mihena ny hatevin'ny volon'ny vatana sy ny tarehiny.
Ny fanandramana amin'ny tsy fahampian'ny lehilahy dia manomboka amin'ny fanadihadiana ara-pitsaboana amin'ny ankapobeny. Ny dokotera dia mandinika ny firaisana ara-nofo avy any ivelany, manangona anamnesis (avy amin'ny taonany no nanombohan'ny fiainana ara-pananahana, ny habetsaky ny fanaovana firaisana ara-nofo, ny fisian'ny rohy mifandray amin'ny lasa). Ho an'ny fanombantombanana amin'ny antsipiriany sy ny famantarana ny antony mahatonga ny lahy tsy ho voan'ny aretina, dia misy rafitra fanodikodinam-panafody.
Anisan'ny fianarana fototra - spermogram . Ity fanadihadiana momba ny laboratoara ity dia manombana ny hatsaran'ny ejaculate sy ny fahafahana mampilamina. Ny spermogram dia ahitana ny fanisana:
ny isan'ny spermatozoa;
Zana-tsokajin-tsolika tsy tapaka.
Fanadihadiana momba ny tsy fahampian'ny olona
Alohan'ny hamaritana ny tsy fahampian-tsakafo eo amin'ny lehilahy, mba hamaritana farany ny fitsaboana, ny dokotera dia mandefa fikarohana betsaka. Anisan'ireo fomba fampiharana ny antony mahatonga ny tsy fahampian'ny lahy:
Fanehoana an-tsary momba ny taolam-paty sy scrotum. Ny tanjona voalohany dia ny hanaisotra ny tsy fetezana amin'ny fivelaran'ny génitifa, varicocele, izay matetika no misakana ny fambolena.
Fitsapam-pitsaboana ho an'ny hormones. Ny testosterone dia mifehy, izay misy fiantraikany mivantana amin'ny rafi-pitondrana.
Ny biopsy testicule dia fandinihana ny tranonkala firaisana ara-nofo. Izany dia mamela ny famaritana ny haben'ny famokarana spermatozoa, anisan'izany ny tsy fahampian'ny sekretera.
Ny fianarana manokana momba ny spermatozoa - ny dokotera dia mandinika ny zava-kendreny, ny fahafahan'ny sela mikiraro miditra ao amin'ny atody.
Ny ultrasound transrecta dia ampiasaina mba hahitana ny fanakanana ny vasile deferens, ny fibobohany.
Fitsapana ho an'ny tsy fahampiana amin'ny lehilahy
Ny fitsirihana ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny lehilahy, afa-tsy spermogrammy, dia mety ahitana fanadihadiana hafa momba ny ejaculate. Ny fitsapana MAR dia matetika ampiasaina. Miaraka amin'ny fanampian'izy ireo, dia misy ny selan'ny kininina voakasika amin'ny vatana mangatsiaka. Ny sperm toy izany dia tsy mahavita mampirona noho ny tsy fahafahana manimba ny atody sy ny fidirana ao anatiny. Raha mihoatra ny 50% amin'ny isa ny isan'ireo spermatozoa ireo dia hita fa voan'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-tsaina ny lehilahy, izany matetika. Ho lasa daddy ianao, dia tsy maintsy manaraka fomba fitsaboana fanampiny.
Fitsaboana ny tsy fahampian'ny lahy
Matetika ny fitsaboana io aretina io dia sarotra amin'ny fahasarotan'ny famaritana ny antony marina, ka ny mikarakara ny tsy fahampiana amin'ny lehilahy dia mikendry ny hanatsara ny asa fananahana amin'ny ankapobeny. Mba hanaovana izany, dia asiana rongony izay mamporisika ny fivelaran'ny sela germs ary manatsara ny fatran'ny rà ao amin'ny taolam-paty. Fitsaboana ara-pahasalamana ho an'ny tsy fahampian'ny lahy dia mikendry ny lahy (tsy fahampian'ny lahy sy ny vavy):
fitsaboana aretina mitaiza ny marary;
famongorana ireo olana amin'ny fahantrana;
famerenana ny aretina hormona.
Fahadisoana amin'ny lehilahy - sa tsia?
Na alohan'ny hanombohan'ny fitsaboana, matetika ny marary matetika no liana amin'ny dokotera - ny tsy fahampian'ny aretina amin'ny lehilahy ary inona no mety ho lasa ray? Ny dokotera dia tsy manome valiny mazava, mandinika ny zava-misy tsirairay. Ny fitsaboana tsara indrindra dia ny endriky ny psykolojia. Rehefa matetika ny sekreteran'ny tsiambaratelo dia manolo ny fomba famokarana vondrona fanampiny.
Fahadisoan'ny lehilahy - fitsaboana, zava-mahadomelina
Ny fomba fitsaboana ny tsy fahampian'ny lehilahy - ny mpitsabo dia mamaritra amin'ny alàlan'ny valin'ny fitsapana natao, ny anton'ny fandikana. Ny fanafody rehetra dia aseho amin'ny fomba tsotra, miaraka amin'ny fampiasana dosage, fahamaroana ary faharetan'ny fampiharana. Anisan'ireo zava-mahadomelina nampiasaina matetika:
Lutain dia fanafody manasitrana. Mampihatra ny fatran'ny fananahana, mampitombo ny fahafaha-mitondra ny selan'ny lahy, mamerina ny fahatsapan'ny mpitsabo ho an'ny hormonina momba ny firaisana.
Ny Spematon dia fitaovana mifototra amin'ny fambolena. Mamerina haingana ny fahavokarana amin'ny lehilahy.
AndroDoz dia fanangonam-ponenana maro izay ahitana ampahany amina asidra amina ao amin'ny firafiny. Manatsara ny kalitaon'ny ejaculate, mampitony ny fahafahan'ny spermatozoa.
Ny tribistana dia fiomanana miorina amin'ny vatofantsika vatofantsika. Mampitombo ny faniriana hanao firaisana ara-nofo, mandrisika ny fahafahan'ny sela ara-pananahana hihinana. Natokana ho an'ny aretina amin'ny rafitra fananahana.
Fahadisoan'ny lehilahy - fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny vahoaka
Raha miresaka momba ny fomba fitondran'ny lehilahy ny tsy fahampian-tsakafo, ilaina ny manamarika ny fahombiazan'ny volombavam-bahoaka tsirairay. Alohan'ny hampiasana azy ireo dia andramo amin'ny dokotera.
Gorisvet - 1 tbsp. sotro;
rano - 500 ml.
Mampidina rano ny rano ny ahitra.
Mianteha 2 ora, tafiditra anaty bodofotsy mafana.
Alaivo dite isaky ny isan'andro ny dite, alaharo manoloana.
Fanesorana ny foton'i Adama
Adams root - 2 tsp.
rano - 200 ml.
Soraty 1 ora.
Raiso, averina sedraina, indroa isan'andro.
Fahadisoan'ny lehilahy - asa
Matetika no fomba fandidiana ny tsy fahampian-tsakafo no fandidiana. Noho izany, ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny lehilahy, vokatry ny varicocele, dia azo ampiharina amin'ny fanitsiana. Azo alaina koa ny fanesorana ny vas deferens. Miaraka amin'ny fihenan-tsakafo spermatozoa kely ao amin'ny tsirinaina, dia azo raisina amin'ny fisoratana amin'ny taham-panafody na ny epididymis ary ampiasaina amin'ny fisalasalana amin'ny artifisialy.
Folacin amin'ny fanomanana ny fitondrana tavy
Herinandro aorian'ny fanesorana cannabis
Aiza ny tranonjaza?
Ny voan'ny androbe
Ahoana ny fomba famolavolana ny firaisana ara-nofo?
Ny endrik'ilay kibo mandritra ny fitondran'ny zatovolahy
Ahoana no hamantarana ny andro fialantsasatra?
Ny tranonjaza ho an'ny lehilahy
Hyperandrogenism amin'ny vehivavy
Pathology ny loha
Eva Longoria dia lasa dokotera manam-pahaizana momba ny siansa
Kafe amin'ny yogora - ny fomba tsara indrindra amin'ny mofo vita amin'ny mofo ary ny fofona maitso
Vitamina ho an'ny kisoa
Kitapo misy tanan-tanana - kilasy maoderina
Mangatsiatsiaka ny fo
Cork eo amin'ny rindrina
Fanomezana alokaloka amin'ny alina - tsara sy ratsy
Bay leaf - tsara sy ratsy
Mihoatra ny tafo balkon ao anatiny?
Akanjo fotsy hoditra
Mofomamy tsara 2013
Fampiofanana mamaky teny sy manoratra ho an'ny ankizy any an-tsekoly
Pumpkin ao anaty saosy salope miaraka amin'ny tongolo lay - hevitra tsy mahazatra amin'ny fanaovana sakafo matsiro
Make up under the dress blue
Kafe maitso ho an'ny fandefasana: sary
Cocktail fitafy ho feno
Tobrex ho an'ny zaza vao teraka